Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: July 2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ခြံဝင်း ကိစ္စ ကန့်ကွက်စာပို့။...။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းရှိ မြေကို မောင်နှမဝမ်းကွဲ တော်သူ ဦးခင်မောင်အေး က စိတ်ပိုင်း ရောင်းချထားခြင်းကို ၂၄ရက်နေ့ ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပါရှိမှုနဲ့ ပတ်သတ်၍ ယနေ့ ကန့်ကွက် စာ ပုိ့ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
" ဒီနေ့ အန်ကယ်တို့ ကြေးမုံသတင်းစာပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းက မြေအရောင်းအဝယ် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သတင်းစာထဲမှာ ပါတဲ့ ရှေ့နေဆီကို ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့ခဲ့တယ်။ စာထဲမှာတော့ ဒီမြေဟာ ရောင်းဝယ်ခွင့် မရှိဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ ဒေါ်စုရဲ့ Position ထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ ဦးခင်မောင်အေးကလည်း ရောင်းပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ အကြောင်း အဲ့ဒီရှေ့နေဆီ စာပြန်ပို့လိုက်တယ်။" ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းရှိ မြေကို မောင်နှမဝမ်းကွဲ တော်သူ ဦးခင်မောင်အေး က မိမိသဘောအတိုင်း စိတ်ပိုင်း ရောင်းချထားပြီးကို ၂၄ရက်နေ့ ကြေးမုံသတင်းစာတွင် လွှဲအပ်ထားသော ရှေ့နေမှတဆင့် ကန်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာပါရှိမှုနဲ့ ပတ်သတ်၍ ဒေါ်စု၏ ရှေ့နေမှယနေ့ ကန့်ကွက် စာပေးပုိ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုရင်ဆိုင်နေသည့် အချိန်နှင့် အချိန်ကိုက် မြေကိစ္စ ပေါ်ထွက်လာခြင်းသည် နိုင်ငံရေး ပယောဂ မကင်းဟု သုံးသပ်သူများက ပြောဆိုပါသည်။
Posted by yahutha at 2:43 AM0comments
Posted by yahutha at 2:48 AM0comments
Posted by yahutha at 4:04 PM0comments
မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး ဂျပန် ရတက်မအေး။...။
N k & MY tw23
Posted by yahutha at 1:09 PM0comments
ရုံးချိန်းတွေ ဆက်ချိန်းနေတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သဘောမကျဟုပြောဆို။....။
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုအတွက် နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်ကို ယနေ့ နေလည် ၂နာရီမှ ၄နာရီခွဲအထိ ကြားနာခဲ့ပြီး လာမည့် တနင်္လာနေ့ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်၁၀နာရီသို့ ထပ်မံချိန်းဆိုလိုက်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
"ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုအတွက် နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်ကို နေ့လည် ၂နာရီကနေ ညနေ ၄နာရီခွဲအထိ ကြားနာ စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ အန်ကယ်တို့ ဘက်က ဦးကြည်ဝင်း တစ်ယောက်ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် လျှောက်လဲချက် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အမှုကို လာမယ့် တနင်္လာနေ့ မနက်၁၀နာရီ ထပ်ပြီး ချိန်းဆိုလိုက်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောလိုက်တာ တခုကတော့ လျှောက်လဲချက်တွေ အားလုံးပြီးအောင် မဆောင်ရွက်ပဲ ရုံးချိန်းတွေ ဆက်ချိန်းနေတာ သဘောမကျဘူးလို့ ပြောဆိုပါတယ် "ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
ယနေ့ရုံချိန်းသို့ ဥရောပ ၅နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမဏီ၊အီတလီနှင့်နော်ဝေနိုင်ငံတို့မှ သံတမာန်များ စကားပြန်များနှင့်အတူ လာရောက် နားထောင်ခဲ့ကြောင်း၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သံတမာန်များအား ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
Posted by yahutha at 1:24 AM0comments
(NCGUB) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် ဂျပန်သတင်း မီဒီယာများနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။....။
ယနေ့ ညနေ၄နာရီ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ချိယိုဒါ ကု၊ ခန်းဒ-စုရုဂါ့ဒိုက် ၃-၂-၁၁ ဆိုးဟျိုး ကိုက်ခန်း အဆောက်အဦး ၃ထပ်ရှိ ရင်ဂို အလုပ်သမားများ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းမ၌ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မြန်မာ့ရေးရာရုံး-ဂျပန်(Burma Office-Japan) မှ တာဝန်ယူ ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်မှ ဂျပန်လူမျိုးများ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာပြည်သူများအား လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေး အခြေအနေ၊နအဖ စစ်အုပ်စုနှင့် မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေး၊အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ နှင့်ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒ တို့ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဂျပန်သတင်းစာဆရာများ၏ မေးမြန်းချက်များကို ဦးဘိုလှတင့် နှင့် ဒေါက်တာ ဦးမင်းညိုတို့က ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပြီး၊ Mr Hisao Tanabe(ဦးရွှေဘ)မှ ဘာသာပြန်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။ စစ်အစိုးရ၏ စစ်ရေးဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းလျွှို့ဝှက်ချက်များ ပေါက်ကြားရခြင်း အကြောင်းရင်း၊မေမြို့ စစ်တက္ကသိုလ်အနီး အဏုမြူစွမ်းအင် ဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ဆောင်နေမှု၊မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် စစ်ဖက်မှ မည်သည့်အတိုင်း အတာအထိ ဆက်စပ်မှုရှိနေခြင်း စသည့် မေးမြန်းချက်များ ကိုပြန်လည် ဖြေကြား ပေးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ အခန်းအနား၌ Mr Masa Yuki Shiota (ရင်ဂိုအလုပ်သမားသမဂ္ဂ) မှ အခန်းအနားမှုး အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး စိတ်ဝင်စားသူဂျပန်လူမျိုးများ၊ ဂျပန်သတင်းဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီး နှင့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်၄၀ခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် မှတက်ရောက် လာသူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး ညနေ ၅နာရီ၂၀တွင် အခန်းအနား ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
သတင်း၊ဓာတ်ပုံ။.....။စိုးအောင်ဝင်း NLD(LA)JB ပြန်ကြားရေး။....။
Posted by yahutha at 1:43 AM0comments
Posted by yahutha at 1:42 AM0comments
ဂျပန်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတည်မြဲပါစေ ကျောက်စာတိုင်သို့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့များမှ သွားရောက် ဂုဏ်ပြုကြခြင်းနှင့်၊ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် ဆွေးနွေ
မြန်မာ့ပြည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်ချဲ့လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့ကို စစ်ပညာသင်ပေးခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးကြီးဇူစူးကီး (မြန်မာအမည် ဗိုလ်မိုးကြိုး)နေရပ်ဖြစ်သည့် ဟာမမတ်စူမြို့တွင်တည်ရှိသည့် `ဂျပန်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတည်မြဲပါစေ`ကျောက်စာတိုင်သို့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာဒီမိုရေစီအဖွဲ့အစည်းအသီသီးမှ သွားရောက်ဂုဏ်ပြုကြခြင်းနှင့်၊ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် ဆွေးနွေး ဟောပြောခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ(ဂျပန်ဌာနခွဲ)တို့မှ ဦးဆောင်၍ သွားရောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
ဓါတ်ပုံ-ကိုပွား သတင်း-နန်းအိမွန်ချစ်၊ စိုးအောင်ဝင်း(NLD-LA JB)
Posted by yahutha at 11:48 PM0comments
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ သတင်း၊ဓာတ်ပုံ။...။
ယနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ မီနမီ အိုစုက ခန်းမ၌ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်း အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေသည့် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် နံနက်၉နာရီမှ နေ့လည်၁၂နာရီထိ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားသို့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ ၅၀ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Posted by yahutha at 2:01 PM0comments
Posted by yahutha at 1:33 AM0comments
၆၂နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ဆွမ်းဆက်ကပ် လှုဒါန်းပွဲ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။...။
၆၂နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ ဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲမှ ကြီးမှုး၍ ဆွမ်းဆက်ကပ် လှုဒါန်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျဆုံးလေပြီးသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အားရည်စူး၍ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆက်ကပ် လှုဒါန်းခြင်း၊ရေစက်ချ အမျှပေးဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
Posted by yahutha at 4:40 PM0comments
အကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမည်ဟု နအဖသံအမတ်က ပြော
UN Secretary General Ban Ki-moon on July 13 told the Security Council that during his recent visit to Burma, where he met Snr. Gen. Than Shwe, who has pledged to make the elections free and fair, but not granted Mr. Ban Ki-moon to meet the pro-democracy leader Aung San Suu Kyi. Burma's ambassador to the UN, U Than Swe, defended in saying his government is processing to grant amnesty toanumber of political prisoners to allow them to participate in democratic elections scheduled for 2010
Posted by yahutha at 1:55 AM0comments
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် နှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း။...။
tw237JULY
Posted by yahutha at 3:30 PM0comments
ယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့တွင်ပြုလုပ်သော ၇ ဂျူလိုင်နေ့ အခမ်းအနား သတင်း၊ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ရှိနာဂါဝမြို့နယ်ရှိ မြန်မာသံရုံး (ခေါ်)စစ်အခွန်ရုံးရှေ့တွင် ၄၇နှစ်မြောက် ၇ ဂျူလိုင်နေ့ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည် ၃နာရီ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အခမ်းအနားသို့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှ စုစုပေါင်းအင်အား၂၅၀ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ကိုမြတ်သူ(လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဂျပန်ဌာနခွဲ)က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဂျပန်ဌာနခွဲမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးသောင်းမြင့်ဦးမှ အာဏာရှင်စနစ် နှင့် ခွပ်ဒေါင်းစိတ်ဓါတ်၏ အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားခြားနားပုံ ကို၎င်း၊ အလင်းအိမ်စာစောင်မှ ကိုရဲငြိမ်းမှ ဇူလိုင်(၇)ရက်သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်ကို၎င်း၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုမောင်မောင်လှ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ ကိုဖုန်းမြင့်ထွန်းတို့မှ ကျောင်းသားများအခန်းကဏ္ဍ နှင့် ပတ်သက်၍၎င်း၊ လက်ရှိခေတ်လူငယ်ကဏ္ဍကို မကြည်ပြာဇော်ဝင်း (လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဂျပန်ဌာနခွဲ)မှ၎င်း၊တိုင်းရင်းသားများနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုမိုင်ကျော်ဦး က၎င်း၊ကိုမြင့်ဆွေ(မြန်မာ့အလုပ်သမားသမဂ္ဂ)မှ အလုပ်သမားအရေးတော်ပုံ သမိုင်းကို၎င်း ကိုယ်စားပြု ပြောကြားသွားခဲ့ပြီးနောက် အာဟာရစာစောင်မှ ကိုသက်လင်းက ကိုကျော်ကျော်ကို (ဗကသအဖွဲ့ချုပ်) ၏ကဗျာကို ကိုယ်စား ဖတ်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဒေါ်သန်းသန်းအေးက ကျောင်းသား များအတွက် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ပန်းစည်းကို နအဖ အခွန်ရုံးအဝင်တံခါးဝ တွင်ထားရှိခဲ့ပြီးနောက် ကြွေးကြော်သံများ သံပြိုင်ရွတ်ဆိုကာ ညနေ ၄နာရီခွဲတွင် အခန်းအနား ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
South &North Korea
Posted by yahutha at 2:44 AM0comments
At Least 140 Killed in China Clashes In China, at least 140 people have been killed and more than 800 wounded in the western Xinjiang region. On Sunday, hundreds of protesters clashed with police ...
Posted by yahutha at 10:27 PM0comments
North Korea Merchant Ship Tw23
Posted by yahutha at 2:04 AM0comments
UN SECRETARY MR. BANKIMOON VISIT BURMA AND REQUEST TO MEET DAW AUNG SAN SUU KYI , RESUME DIOLUGE WITH OPPOSITIONS AND RELEASE ALL POLITICAL PRISONERS INCLUDING DAW AUNG SAN SUU KYI.
United Nations secretary general Ban Ki-moon and Japanese prime minister Taro Aso met in Tokyo to discuss regional problems in Asia. At the forefront of the talks were the condition of one high pro...
Posted by yahutha at 3:15 AM0comments
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဘန်ကီမွန်းကို တွေ့ခွင့်မပေး link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် တွေ့ဆုံဖို့ စစ်အစိုးရ ခွင့်မပြု link
- ဘန်ကီမွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်မရ link
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် လုံခြုံရေးများ အထူးတင်းကြပ် link
- ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည် ဒီကနေ့ရောက်မည် link
- ဘန်ကီမွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရမရ မသေချာသေး link
- မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် ခက်ခဲသည့် ခရီးစဉ်ဟု ဘန်ကီမွန်း ပြောဆို link
- နအဖကို ပိုမိုဖိအားပေးရန် ဘန်ကီမွန်း တိုက်တွန်းတောင်းဆို link
Posted by yahutha at 2:41 AM0comments